Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း)
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Fraxiparine® သည် သွေးမခဲဆေး အမျိုးအစားတွင် ပါဝင် ပါသည်။ ၎င်းကို သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အသုံးများပါသည်။
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Nadroparin မထိုးသွင်းမီ သင့်လက်နှင့် ထိုးသွင်း မည့်အရေပြားနေရာကို ဆေးကြောပါ။ ဆေးရည်သည် ကြည်လင်ပြီး အမှုန်များမပါမှသာ ထိုးသွင်းပါ။
လဲလျောင်းပြီး သင့်လက်မ၊ လက်ချောင်းဖြင့် အရေပြား ( များသောအားဖြင့် ဝမ်းဗိုက် အောက်ပိုင်း) ကို ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း တွင် နေရာခွဲ၍ ထိုးပါ။ ( ဥပမာ- တစ်ရက်တွင် ညာဘက် ထိုးလျှင် နောက်တစ်ရက်တွင် ဘယ်ဘက်ထိုးပါ)
အရေပြားတွင်းသို့ အပ်တစ်ချောင်းလုံးကို တည့်မတ် စွာ ထိုးထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဆေးထိုးရန် ဆေးထိုးအပ် ပြွတ်တံကို ထိုးတည့်ပါ။ ဆေးထိုးနေစဉ် တစ်ချိန်လုံး အရေပြားကို ကိုင်ထားပါ။
ဆေးထိုးပြီးပါက အပ်ကို အရေပြားမှ ထုတ်လိုက်ပါ။ အပ်ကို အခြားသူများ မစူးစေရန် အဖုံးစွပ်ပါ။
စက္ကန့် အနည်းငယ်ကြာ ထိုးသွင်းသော နေရာကို ဖိရန် အရက်ပျံ သုံးပါ။ ထို့နောက် ထိုနေရာကို မပွတ်ပါနှင့်။
ဆေးထိုးအပ်ကို ဘေးကင်းအောင် စွန့်ပစ်ပါ။ ဆေး ထိုးအပ်တစ်ခုကို တစ်ခါပဲ အသုံးပြုပါ။
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Fraxiparine® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Fraxiparine® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Fraxiparine® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Fraxiparine® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Fraxiparine® ကို မသုံးမီ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Fraxiparine® ပါသော အရာများကို ဓါတ်မတည့် ခြင်း
အခြားဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိခြင်း၊ Fraxiparine® နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများ သုံးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Fraxiparine® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Fraxiparine® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Fraxiparine® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်။
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဝမ်း အမည်းရောင် သွားခြင်း
အရေပြား အရောင်ကွက်များ ဖြစ်ခြင်း
လူတိုင်းတွင် ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ လည်း ရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fraxiparine® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ထုတ်ကုန်များမှာ-
စတီးရွိုက် မပါသော အရောင်ကျဆေးများ (NSAID)
သွေးခဲခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော ပစ္စည်းများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Fraxiparine® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fraxiparine® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးကြွက်သား ပုပ်ခြင်း၊ non-Q wave
အရေပြားထဲသို့ ပထမဦးဆုံး 86 anti-factor Xa International Units (IU) per kg of body weight သွင်းပါ။ ထို့နောက် နောက် ၆ရက်တွင် ၁၂ နာရီတစ်ခါ 86 anti-factor Xa IU per kg of body weight သွင်းပါ။
သွေးခဲပိတ်ခြင်း၊ အဆုတ်နှင့် သွေးပြန်ကြောတွင် သွေးခဲ ပိတ်ခြင်း (ကာကွယ်ရန်)
ပုံမှန် ခွဲစိတ်ခြင်း။ ခွဲစိတ်မှု မတိုင်မီ ၂-၄ နာရီမှစပြီး 2850 anti-factor Xa IU per day ကိုအရေပြားထဲသို့ ထိုးသွင်းပါ။ လူနာ သည် ကောင်းစွာ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်အထိ အနည်းဆုံး ၇ ရက်လောက် ဆက်ပေးပါ။
တင်ပါးဆုံ အစားထိုး ခွဲစိတ်ခြင်း။ ခွဲစိတ်မှု မတိုင်မီ ၁၂ နာရီ၊ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ၁၂ နာရီ နှင့် ခွဲစိတ်မှုအပြီး ပထမ ၃ ရက်တွင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ် 38 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အရေပြားထဲ ထိုးသွင်းပါ။
ထို့နောက် ခွဲစိတ်ပြီး ၄ ရက်မြောက်နေ့မှစပြီး 57 anti-factor Xa IU per kg of body weight သွင်းပါ။ အနည်းဆုံး ခွဲစိတ်ပြီး ၁၀ ရက်မြောက်နေ့ အထိ လူနာ ကောင်းစွာ လမ်းလျှောက်နိုင်သည် အထိ ဆက်သွင်းပါ။
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း (ကုသမှု)
ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလီုဂရမ် ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ၁၀၀ ကီလီုဂရမ် ထက်များသော လူနာများ
အတိအကျ ဆေးညွှန်း ထုတ်ပြန်မထားပါ။ ဆေးပမာဏသည် ဆေးခန်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေများအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြား သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀-၁၀၀ ကီလီဂရမ် ရှိသော လူနာများ
တစ်နေ့တစ်ကြိမ် 171 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အရေးပြားထဲ ထိုးသွင်းပါ။ သို့မဟုတ် သွေး ထွက်များသော လူနာများတွင် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် 86 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို အရေပြားထဲ ထိုးသွင်းပါ။ နိုင်ငံတကာ ပုံမှန်အချိုး (INR) သည် ၅ရက် အကြာတွင် များသောအားဖြင့် တွေ့ရသော ကုသနိုင်သော အတိုင်းအတာအတွင်း ရှိနေသ၍ ကုထုံးကို ဆက်ပေးနိုင် သည်။
သွေးလဲမှု ပြုလုပ်နေစဉ် သွေးခဲခြင်း ( ကာကွယ်ရန်)
လေးနာရီ သို့မဟုတ် လေးနာရီအောက် ကြာနိုင်သော အချိန်ကာလတစ်ခု၏ အစတွင် 65 anti-factor Xa IU per kg of body weight ကို သွေးကြောတွင်း ထိုးသွင်းပါ။ ထပ်မံ ၍ လေးနာရီထက်ကြာသော အချိန်အတွင်း ပမာဏ နည်း နည်း ထပ်ပေးနိုင်သည်။ သွေးထွက်နိုင်ချေ မြင့်သော လူနာ များတွင် ဆေးပမာဏကို ထက်ဝက်ခွဲပါ။
ကလေးတွေအတွက် Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာ များအတွက် ဆေးညွှန်းမှာ အတိအကျ မရှိ သေးပါ။ ကလေးများအတွက် စိတ်မချရပါ။ အသုံးမပြုခင် ဘေးကင်းမှုကို အပြည့်နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ပိုမို သော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Fraxiparine (ဖရာဇီပရင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Fraxiparine® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
9500 anti-Xa IU per 1ml
19000 anti-Xa IU per 1ml
Fraxiparine® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 19, 2017
Fraxiparine® (nadroparin). https://www.drugs.com/mmx/Fraxiparine.html. Accessed November 13, 2016
Fraxiparine® (nadroparin). http://chealth.canoe.com/Drug/GetDrug/Fraxiparine. Accessed November 13, 2016
Fraxiparine® (nadroparin). https://www.uniprix.com/en/drug-lexicon/4954/fraxiparine. Accessed November 13, 2016